Askar ka tirsan ciidanka dowladda oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay Afgooye – STAR FM SOMALIA
Ugu yaraan sideed ruux oo afar ka mid ah ay ahaayeen askar ka tirsan Ciidamada dowladda ayaa ku dhaawacantay qarax miino oo duhurnimadii maanta ka dhacay degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Qaraxa ayaa ka dhacay suuqa qudaarta dowladda hoose, waxaana uu ahaa miinada dhulka la geliyo oo meelaha fog laga hago.
Wararka ayaa intaa ku daraya in qaraxa la geliyay meel ay fariistaan ciidamada dowladda hoose oo la sheegay inay lacagaha canshuuraha ku qaadaan.
Rasaas ay fureen ciidamada ayaa waxaa ku dhaawacmay dad rayid ah oo suuqa ka ag dhowaa, waxaana qaraxa kadib hakad galay dhaq dhaqaaqii suuqa.
Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay qaraxan, waxaase weerarada noocaan oo kala ah ciidamadda dowladda iyo kuwa Amisom la beegsado kooxda Al-Shabaab.